Ukuzikhulula | Izinkampani Zomthetho eDubai
SICELA USIFUNDE LESI SIVUMELWANO KAHLE. LE MIGOMO YENKONZO ICHAZA IMIGOMO ELAPHA NGAPHANSI KWAKHO I-AL OBAIDLI & AL ZAROONI INIKEZA IZINKONZO ZOMTHETHO NGENGOSI YAYO EKU WWW.LAWYERSUAE.COM (kusukela manje kubhekiselwa kukho kulo mbhalo njengokuthi “AL OBAIDLI & AL ZAROONI” “LAWYERS UAE” “Thina,” “Thina,”)
NGOKUFUMA NOMA USEBENZISA INKONZO, UVUMA UKUBOSHWA IMIGOMO YENKONZO EBEKWE NGEZANSI. UMA UNGAFISI UKUBOSHWA NGALE MIGOMO YENKONZO, UNGAMELE UNGAFINYELI NOMA UYISEBENZISE INKONZO. LE webhusayithi INIKAWULO FUTHI IPHATHWE NGU U-AL OBAIDLI & U-AL ZAROONI AMA-ADVOCATES NONCULEKILE WEZOMTHETHO.
UYAQONDA UKUTHI U-AL OBAIDLI & AL ZAROONI ADVOCATES KANYE NABANEKISI BEZOMTHETHO ANGASILUNGISA LESI SIVUMELWANO NOMA YILUPHI ISIKHATHI, FUTHI IZINGUQUKO LEZO ZIZOSEBENZA NGOKUSHESHA EMVA KOKUTHUNYELWA KWESIVUMELWANO ESILUNGISIWE KUSAWU. UYAVUMA UKUBUYEKEZA ISIVUMELWANO NGEZIKHATHI UKUBA UQAPHELE IZINGUQUKO LEZO FUTHI UKUFIKELELA KWAKHO OKUQHUBEKAYO NOMA UKUSEBENZISA INsizakalo KUYOTHOLAKALA UKUTHI UKWAMUKELA KWAKHO OKUPHEPHILEYO KWESIVUMELWANO ESICHITSHIWE.
I-LawyersUAE.com iyinkundla eku-inthanethi yolwazi lwezomthetho nokuzisiza. Ulwazi esilunikeze thina kanye nokuqukethwe kuwebhusayithi yethu okuhlobene nezindaba zomthetho (“Ulwazi Lomthetho”) kuhlinzekelwe okomuntu siqu futhi akusona iseluleko sezomthetho. Asibuyekezi noma yiluphi ulwazi osinikeza lona ukuze uthole ukunemba kwezomthetho noma ukwanela, sifinyelela iziphetho ezingokomthetho, sinikeze imibono mayelana nokukhetha kwakho amafomu, noma sisebenzise umthetho kumaqiniso ngesimo sakho.
Asiyona Ifemu Yomthetho futhi ukusebenzisa kwakho le sevisi akubambi ubudlelwano bommeli neklayenti. Uyaqonda ukuthi nguMmeli onelayisensi kuphela onganikeza iseluleko sezomthetho. I-Al Obaidli kanye ne-Al Zarooni nanoma yiluphi ulwazi Lwezomthetho olunikezwe i-LawyersUAE.com aluthatheli indawo yeseluleko sezomthetho esivela kummeli oqeqeshiwe onelayisensi yokusebenza endaweni efanele.
Ngaphandle kokuba umelelwe ngenye indlela ngummeli, kuhlanganise noMmeli Obekiwe, uzimela kunoma yiluphi udaba olusemthethweni olwenzayo ngeMisebenzi yethu.
I-LawyersUAE.com noma i-Lawyers UAE ayiyona “Isevisi Yokudluliswa Kommeli”. Uhla lwemibhalo lwabameli olushicilelwe kusizindalwazi sethu lunikezwa umphakathi mahhala futhi lungokwezinjongo zokwaziswa kuphela. I-LawyersUAE.com ayincomi noma incoma noma yimuphi ummeli futhi ayenzi iwaranti mayelana neziqu noma ikhono lanoma yimuphi ummeli.
Uma usebenzisa i-Platform yethu, uzoba nethuba lokuqala ukuxhumana nommeli (“Ummeli Osohlwini”). Abameli Abasohlwini ababona abasebenzi noma ama-ejenti akwaLawyersUAE.com noma Abameli be-UAE. Abameli Abasohlwini bangosonkontileka abazimele abaphethe inkambiso yabo yezomthetho futhi bavumile ukunikeza izimpendulo ze-inthanethi, ukubonisana okulinganiselwe, noma ezinye izinsiza zomthetho eziyisisekelo kubasebenzisi be-LawyersUAE.com noma Abameli be-UAE. Ukuxhumana Nommeli Osohlwini Nge-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants AKUDINGEKILE. Nokho, uma ukhetha ukuxhumana Nommeli Osohlwini Ngabameli Be-UAE, sicela uqaphele lokhu okulandelayo (a) Uma uthintana Nommeli Osohlwini Ngabameli Be-UAE, angase akunikeze ukubonisana kokuqala, ukubuyekezwa okusemthethweni kwamafomu noma imibhalo yakho. , noma izimpendulo zemibuzo yakho yezomthetho. Sicela uqaphele ukuthi noma yikuphi ukusebenzelana okunjalo kuhloswe ukuba kube isiqalo sokubhekana nendaba yezomthetho noma ukubhekana nemibuzo yezomthetho eyisisekelo kanye nanoma ibuphi ubudlelwano bommeli neklayenti obakhiwe phakathi nalokho kusebenzisana buphakathi kwakho kanye Nommeli Osohlwini (b) Lapho thintana Nommeli Osohlwini Ngabameli Be-UAE, angase akucele imininingwane ethile mayelana nawe nezindaba zakho zomthetho ukuze abhekane kahle nemibuzo yakho. Ngokusebenzisa Izinhlelo zethu, uyavuma ukwabelana ngolwazi olunjalo lomuntu siqu ngenjongo yokuthola iseluleko sezomthetho nabo bobabili ummeli ocelayo kanye Nabameli be-UAE. Abameli be-UAE bazokwazi ukufinyelela noma yikuphi ukuxhumana okulethwe ngenkundla yethu ukuze kugcwaliseke nezinjongo zokuqinisekisa ikhwalithi (c) Uma uthintana Nommeli Osohlwini Ngabameli Be-UAE, ulawula kokubili ubude besikhathi nokujula kokusebenzelana. Noma ibuphi ubudlelwano bommeli neklayenti obakhiwe phakathi nalokho kusebenzisana, ngokukhetha kwakho, (i) bungase buphele lapho ukuxhumana nommeli osohlwini kuphela, noma (ii) kuqhubeke uma ufisa ukubandakanya Ummeli Osohlwini ukuze uthole ezinye izinkonzo zomthetho. (d) Uma ufisa ukwakha ubudlelwano bommeli neklayenti Nommeli Osohlwini obudlulela ngalé kokusebenzisa kwakho Izinkonzo zethu, lobo budlelwano buyoba ngokwanoma yimiphi imigomo oyisungulayo nommeli okukhulunywa ngaye. Leyo migomo ayibandakanyi Abameli be-UAE futhi, ngaphandle kwezaphulelo ezikhethekile zokuxoxisana zamalungu ethu, asizimisi, asizilawuli noma sizithonye. Isibonelo, Ummeli Osohlwini angase akucele ukuthi usayine isivumelwano sokumelela esisemthethweni mayelana nobubanzi bomsebenzi azowenza, izindleko zezinsizakalo zabo zezomthetho, kanye nokuphathwa kwanoma yiziphi izindleko eziphuma ephaketheni abangase bazithole. (e) Abameli Abasohlwini bangase banxeshezelwe Abameli I-UAE Yezinkonzo ezenziwe egameni lakho, kodwa, Abameli I-UAE ayitholi noma iyiphi ingxenye yezimali ezikhokhiswayo eziqoqwe yinoma yibaphi abameli kunethiwekhi yethu. Kuzo zonke izimo, Abameli be-UAE ngeke babe nomthelela noma baphazamise nganoma iyiphi indlela ukwahlulela okuzimele kommeli.
UMNYANGO NOKUSEBENZA IZINDABA ZAKHO
I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE ayifuni ubunikazi banoma imaphi amadokhumenti owadalayo noma owalayishayo futhi owagcina usebenzisa Amasevisi ethu (“Amadokhumenti”). Unikeza imvume ku-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli be-UAE ukuthi basebenzise Amadokhumenti akho mayelana nokuhlinzeka Ngezinsizakalo kuwe.
Uyavuma futhi uyavuma ukuthi i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE ingase igcine lawa madokhumenti futhi iwadalule uma kudingeka ukwenza kanjalo ngokomthetho noma ngenkolelo enhle yokuthi lokho kugcinwa noma ukudalulwa kuyadingeka ngokunengqondo ukuze kufezwe noma yikuphi. kokulandelayo: (1) ukuthobela inqubo yezomthetho, imithetho esebenzayo noma izicelo zikahulumeni; (2) ukuphoqelela le Migomo; (3) ukuphendula izimangalo zokuthi noma yikuphi okuqukethwe kwephula amalungelo abantu besithathu; noma (4) ukuze kuvikelwe amalungelo, impahla, noma ukuphepha komuntu siqu kwe-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE, abasebenzisi bayo kanye nomphakathi. Uyaqonda ukuthi ukucutshungulwa kobuchwepheshe nokudluliswa Kwesevisi, okuhlanganisa nokuqukethwe kwakho, kungase kuhilele ukuthunyelwa ngamanethiwekhi ahlukahlukene kanye nezinguquko ukuze zivumelane futhi zivumelane nezimfuneko zobuchwepheshe zokuxhuma amanethiwekhi noma amadivayisi. Uyavuma ukuthi i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE ayinaso isibopho noma isibopho sokususa noma sokwehluleka ukugcina noma yikuphi okuqukethwe okunakekelwa noma okulayishwe Amasevisi.
Ngokwenza i-akhawunti, uyavuma ukuthi ungathola ukuxhumana kwe-imeyili okuvela kwa-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli be-UAE, njengezincwadi zezindaba, izipesheli, izikhumbuzo nezibuyekezo. Futhi uyaqonda ukuthi ungazikhipha kulokhu kuxhumana ngokuchofoza isixhumanisi "Zikhiphe ohlwini" ngaphansi kwe-imeyili yangempela.
Imisebenzi yethu ifaka phakathi inani elikhulu lalokho okubizwa ngokuthi “Imisebenzi Yezokuxhumana.” Lokhu kufaka phakathi izinsizakalo ezinjengezintambo zokuphawula, okuthunyelwe kwebhulogi, imikhiqizo yemibuzo nezimpendulo, izinkundla zokuxhumana zamakhasimende, nezinye izinsizakalo zemiyalezo. Uyavuma ukusebenzisa Izinsizakalo Zokuxhumana ukuthumela kuphela, ukuthumela, nokwamukela imiyalezo noma izinto ezifanele futhi ezihlobene Nesevisi ethile Yezokuxhumana. Uma usebenzisa i-Service Service, uyavuma ukuthi ngeke wenze noma yikuphi okulandelayo:
Ukuhlukunyezwa, ukuhlukunyezwa, ukuhlukumezeka, ukuguga, ukusongela noma ukuphula amalungelo angokomthetho abanye.
Shicilela, uthumele, ulayishe, usakaze noma usakaze noma yimaphi amagama, izinto zokwakha, noma ulwazi olubhekwa njengokungalungile, okungcolile, ukuhlambalaza, ukwephula umthetho, okuhlambalazayo, okungahambi kahle, noma okungekho emthethweni.
Dala ubunikazi obungamanga, uzimele njengomunye umuntu, noma usayine isivumelwano njengomunye umuntu noma egameni lomunye umuntu noma ngokungahambisani noma ususe efayeleni elilayishiwe noma yiziphi izimfanelo ezibalulekile noma izaziso.
Layisha amafayela aqukethe isofthiwe noma ezinye izinto ezivikelwe yimithetho yendawo yengqondo noma ngamalungelo wobumfihlo noma ukukhangisa ngaphandle uma
ungumnikazi noma ulawula amalungelo adingekayo, noma
uthola konke okuvunyelwe ukukwenza.
Layisha amafayela onakele, amafayela aqukethe amagciwane, noma amanye amafayela angalimaza ukusebenza kwekhompyutha yomunye.
Khangisa, unikele ukuthengisa, noma unikeze ukuthenga noma yini ngezinhloso zebhizinisi ngaphandle kwezinga elinganiselwe noma yiliphi isevisi yokuxhumana ethile evumela umsebenzi onjalo.
Vimbela noma vimbela noma yimuphi omunye umsebenzisi ekusebenziseni nasekujabuleleni Izinsizakalo Zokuxhumana.
Ukuvuna noma ukuqoqa ulwazi lomuntu siqu olumayelana nabanye, ngaphandle kwemvume yabo.
Vula noma iyiphi ikhodi yokuziphatha noma enye imihlahlandlela, engase isebenze kunoma iyiphi insizakalo yezokuxhumana.
Vula noma yimiphi imithetho esebenzayo noma iziqondiso.
Nakuba i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE ayinaso isibopho sokuqapha Izinkonzo Zokuxhumana, sinelungelo, ngokubona kwethu, lokubuyekeza nokususa izinto ezisetshenziswayo ezithunyelwe Kusevisi Yezokuxhumana, ngokuphelele noma ingxenye. I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli I-UAE inelungelo lokudalula noma yiziphi izinto ezisetshenziswayo ezithunyelwe, ulwazi noma umsebenzi njengoba kudingeka ukuze kwanelise noma yimuphi umthetho osebenzayo, izimiso, inqubo yezomthetho, noma isicelo sikahulumeni.
AKUSEBENZISWA OKUSEBENZISWA KANYE NOMA OKUSEBENZISWA
Ungasebenzisa izinhlelo zethu kuphela uma zingangqubuzani noma zingaphuli imithetho yezindawo zakho. Ukutholakala Kwamasevisi ethu endaweni yakho akusona isimemo noma okunikezwa yi-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli be-UAE ukuze bafinyelele noma basebenzise iwebhusayithi yethu noma Izinkonzo. Ngokusebenzisa Izinhlelo zethu, wamukela umthwalo wemfanelo kuphela wokuthi ukusetshenziswa kwakho noma iliphi ilungu lomndeni noma ukufinyelela Ezinhlelweni zethu akuphuli noma yimiphi imithetho esebenzayo endaweni yakho. Ukuze kusetshenziswe lokhu kulungiselelwa, i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Consultants Legal or Lawyers UAE inelungelo lokwenqaba ubulungu, noma ukumisa okwesikhashana noma ukuvala i-akhawunti yakho ngokushesha nangaphandle kwesaziso sangaphambili ngokubona kwethu.
Okulandelayo kukhishwe ngokuqondile noma kuvinjelwe:
Ukusetshenziswa okuhlobene nanoma yiluphi udaba olungokomthetho olungenangqondo, olungabonakali noma olungekho emthethweni ngokwemvelo, njengoba kunqunywe i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli be-UAE noma Ummeli Osohlwini ngokubona kwabo;
Sebenzisa ngokuphathelene nanoma yiluphi udaba lwezomthetho oluhilela ubugebengu obusolwa ngokudlwengula;
Sebenzisa ngokuphathelene nanoma yiluphi udaba lwezomthetho olubandakanya imithetho yeziphathimandla ezingaphandle kwe-United Arab Emirates noma iziqephu zayo;
Sebenzisa ngokuphathelene nanoma yiluphi udaba lwezomthetho okwamanje noma olumelela ngempumelelo iseluleko sezomthetho.
Sebenzisa ngokuphathelene nanoma yiluphi udaba lwezomthetho ukuthi, njengoba kunqunywe uMmeli Obekiwe ngokuhlakanipha kwakhe kuphela, akanayo ukufaneleka okwanele ukugunyaza ukuphishekela, noma okuye kwaphakanyiswa izikhathi eziningana noma ezingenangqondo ngaphandle kokushintsha kwezimo;
Sebenzisa ngokuphathelene nanoma yiluphi udaba lwezomthetho oluhilela ngqo noma ngokungathí sina noma yiliphi i-Attorney elishiwo ngaphandle kwezeluleko;
Sebenzisa ngokuphathelene nanoma yiluphi udaba olungokomthetho oluhilela ngokuqondile noma ngokungaqondile Advocates Al Obaidli & Al Zarooni & Legal Consultants noma Lawyers UAE nanoma yimaphi amanxusa ayo, abaqondisi, ama-ejenti, abasebenzi, noma abanye Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE abahlinzeki bezinsizakalo; noma
Sebenzisa ngokuphathelene nanoma yiluphi udaba lwezomthetho lapho Umxhasi Wohlelo lwakho enentshisekelo engafanele, noma lapho noma yimuphi umqondisi, isikhulu, i-ejenti noma umsebenzi onentshisekelo engathandeki. Ngezinjongo zaleli lungiselelo, “Umxhasi Wohlelo” usho noma iyiphi inkampani, inhlangano noma inhlangano ethenga noma enikezayo egameni lamalungu ayo noma abasebenzi, i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli uhlelo lwezomthetho lwe-UAE ngamashaneli athengisa izinto zonke, ukudayisa. iziteshi noma okunye. Sicela ubheke Umxhasi Wohlelo lwakho ukuze uthole imikhawulo eyengeziwe.
Akumele ugqekeze, "scrape" noma "crawl" Rocketlawyer.com ngokuqondile noma ngabaxhumanisi abafana nezicabucabu, amarobhothi, izicabucabu, ama-scrapers, amafreyimu, ama-iframe noma ama-RSS feed, noma ungafinyelela noma uzame ukufinyelela noma yiluphi ulwazi Al Obaidli & Al. I-Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli i-UAE ayenzanga kutholakale wena ngamabomu kuwebhusayithi yayo ngokubhalisele okuthengiwe. Ukusebenzisa kwakho i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma iwebhusayithi ye-Lawyers UAE ayikuvumeli ukuthi udayise kabusha noma iyiphi i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli be-UAE okuqukethwe ngaphandle kwemvume ebhaliwe evela ku-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Abeluleki Bezomthetho noma Abameli be-UAE.
Ngokuncike ekuthobeleni kwakho le Migomo, ngalokhu unikezwa ilayisense engakhethekile, enomkhawulo, engadluliseki, ehoxiswayo ukusebenzisa Amasevisi njengoba sihlose ukuthi asetshenziswe. Njengomsebenzisi obhalisiwe we-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE, unelayisensi yokugcina, kumarekhodi akho siqu, amakhophi e-electronic noma aphathekayo amadokhumenti owadalile ku-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli. I-UAE. Akumele ukopishe amafomu noma izivumelwano ze-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli be-UAE ezizosetshenziswa noma ezithengiswa ngaphandle kwe-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli UAE. Noma yimaphi amalungelo anganikezwanga ngokucacile kule Migomo agodlwe i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli UAE.
Lapho udlulisela okuqukethwe komsebenzisi ku-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE, ngalokhu unikeza i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli be-UAE kanye nezinkampani ezingaphansi kwayo okungakhethekile, okungenayo imali yobukhosi, okuphakade, okungenakuhlehliswa futhi okungaphansi. ilungelo lokusebenzisa, ukukhiqiza kabusha, ukuguqula, ukujwayela, ukushicilela, ukuhumusha, ukudala imisebenzi esuselwe, ukusabalalisa, ukwenza nokubonisa noma yikuphi okuqukethwe okunjalo, okuhlanganisa nomhlaba wonke kunoma iyiphi imidiya. Uma uthumela impendulo noma iziphakamiso mayelana neziNsizakalo zethu, singase sisebenzise impendulo noma iziphakamiso zakho ngaphandle kwesibopho kuwe.
I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Consultants noma Abameli noma Abameli I-UAE igcina konke okulungile, isihloko kanye nentshisekelo ezinsizeni zayo, okuhlanganisa, ngaphandle komkhawulo, umbhalo, ihluzo, imidwebo, amalogo, izimpawu zesevisi, amalungelo okushicilela, izithombe, amavidiyo, umculo, kanye wonke amalungelo empahla yengqondo ehlobene. Ngaphandle kokuthi kuhlinzekwe ngenye indlela kulesi sivumelwano, awukwazi, futhi angeke uvumele abanye ukuthi: bakhiqize kabusha, baguqule, bahumushe, bathuthukise, bahlakaze, bahlakaze, bahlehlise ukuthengisa konjiniyela, ilayisense, ilayisensi engaphansi, ukuqasha, ukuqashisa, ukusabalalisa, ukukopisha, ukuboniswa esidlangalaleni, shicilela, uguqule, uhlele noma udale imisebenzi esuselwe kunoma yimiphi imikhiqizo namasevisi wethu;
Amawebhusayithi e-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli Amawebhusayithi e-UAE angase aqukathe izixhumanisi ezinsizeni zezinkampani zangaphandle namabhizinisi aku-inthanethi, abizwa lapha ngokuthi “izixhumanisi” noma “Amasayithi Axhunyiwe.” Lezo zixhumanisi zihlinzekelwe ukuze kube lula kuwe ukukusiza ukuthi ukhombe futhi uthole ezinye izinsiza ze-inthanethi ongase ube nentshisekelo kuzo. I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE ayixhasi futhi ayihlotshaniswa ngokusemthethweni nanoma imaphi “amasayithi axhunyiwe” ezinkampani zangaphandle. I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE ayigunyaziwe ngokusemthethweni ukusebenzisa noma yiliphi igama lokuhweba, uphawu lokuhweba olubhalisiwe, ilogo, uphawu olusemthethweni noma impahla ene-copyright engavela kusixhumanisi.
I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli I-UAE ayilawuli, ituse noma iqaphe okuqukethwe kwanoma iyiphi Isayithi Exhunyiwe. Lokho kufaka, ngaphandle komkhawulo, noma yisiphi esinye isixhumanisi esiqukethwe kuSayithi Elixhunyiwe, kanye nanoma yiziphi izinguquko noma izibuyekezo zeSayithi Elixhunyiwe. I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli I-UAE ayinasibopho sokusakaza ngewebhu noma nganoma yiluphi olunye uhlobo lokudlulisela olutholwa kunoma iyiphi Isayithi Elixhunyiwe. Le Migomo ayifaki ukusebenzisana kwakho Namasayithi Axhunyiwe. Kufanele ubuyekeze ngokucophelela imigomo nemibandela kanye nezinqubomgomo zobumfihlo zanoma yiziphi izingosi zezinkampani zangaphandle.
Uma usebenzisa noma iyiphi isevisi ehlinzekwe Kusayithi Elixhunyiwe, (a) Ama-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE ngeke babe nesibopho sanoma yisiphi isenzo noma ukweqiwa kwenkampani yangaphandle, okuhlanganisa ukufinyelela kwenkampani yangaphandle noma ukusebenzisa kwakho idatha yekhasimende kanye (b) Ne-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE ayigunyazi noma isekele noma iyiphi isevisi ehlinzekwa inkampani yangaphandle.
UKUKHULULELA UKUFANELELA KANYE NOKUTHUTHUKISWA
Ulwazi olutholwe nge-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE akufanele kuthenjelwe kulo ukuze kuthathwe izinqumo zomuntu siqu noma zomthetho. Kufanele uxhumane nochwepheshe abafanelekile ukuze uthole iseluleko esifanelana nesimo sakho. Ngamafuphi, ukusebenzisa kwakho Izinkonzo kuyingozi yakho.
NGEZINGA ELIGCWELE LEMTHETHO, U-AL OBAIDLI & AL ZAROONI ABADLALI KANYE NABECEBISI BESEMTHETHO KANYE NAMTHETHO E-UAE KANYE NEZINHLOBO ZAYO, ABAHLINZEKI KANYE NABASABALI BENZI IZIQINISEKISO, OKUVELA NOMA OKUSHIWO, NGENXA YAYO. IZINKONZO ZINIKEZWA NGOKUTHI “NJENGOBA ZINJALO.” KANYE NEZISEKELO “NJENGEZIKHONA”. SIYAKUPHINDA NGOKUGAKAZIYO IZIQINISEKISO ZOKUTHENGISA, UKULUNGELA INHLOSO ETHILE, NOKUNGEPHULI. ULWAZI KANYE NEMIBONO ETHOLAKILE NGENGOSI OKUMELE AKUMELE KUTHENJWE KUZO NGEZINQUMO ZOMUNTU, ZEZOkwelashwa, ZOMTHETHO, NOMA ZEZIMALI FUTHI KUFANELE UBONISANE NONGCWEPHESHE OFANELE NGENXA YEZELULEKO EZITHILILE EZIFANELEKILE ESIMO SAKHO.
NGEZINGA ELIGCWELE LEMVUMISO YOMTHETHO, AKUKHO MCIMBI U-AL OBAIDLI & AL ZAROONI ABAMELELI KANYE NABACEBISI BEZOMTHETHO KANYE NAMTHETHO WASE-UAE, IZINHLOBO ZAYO, ABAHLINZEKI NOMA ABASABALI BAYOBOPHEZWA NGANOMA YIYIPHI IMALI ENGAQONDI, EKHETHEKILE, EKHETHEKILE, NGENXA YOMTHETHO. YOKUSETSHENZISWA, IDATHA, IBHIZINISI, NOMA IZIMALI, KUNGAKHATHALISEKI ITHIYORI YOMTHETHO, KUNGAKHATHALISEKI NOMA CHA U-AL OBAIDLI & AL ZAROONI AMADVOCATES KANYE NABECEBISI BEZOMTHETHO KANYE NAMTHETHO I-UAE IXWAYISIWE NGAKHONA OKUNGENZEKA KONAKONA LOBU BONA, KANYE NEZIMALI ZEZIMALI. .
U-AL OBAIDLI KANYE NO-AL ZAROONI AMADVOCATES KANYE ABACEBISI NEZEMTHETHO KANYE NAMTHETHO I-UAE AYIBE NESIBOPHO NOMA ISIBOPHO SANOMA YILUPHI UHLOBO NGANOMA YILUPHI IZINKONZO ZOBUCHWEPHESHE EZINIKEZELWA YIMUPHI UMMELI OHLANGANA NAWO NOMA NGOKUSEBENZA KWAKHO, KANYE NOMSEBENZI WETHU. INGOZI YAKHO
U-AL OBAIDLI KANYE NO-AL ZAROONI ADVOCATES KANYE NABEXULEKISI BEZOMTHETHO KANYE NAMTHETHO ISIBOPHO SESIBILI SE-UAE SAZO ZONKE IZICELO EZIPHATHELENE NEZINKONZO NGEKE ESE EDLULA NGENKULU KA-$500 NOMA IMALI EKHOKHWE NGUWE FUTHI UYI-ALSUSI FUTHI U-ALSULWANT LE-LAVOIDERS LE-UAE UZE U-ALSUSE FUTHI UYI-ALEVOIDERS LEVODAL UAE. IZINYANGA EZIYI-12 EZANDULELA IZINKONZO EZIBUZWAYO.
UKUKHULULELA KANYE NOKUPHILA
Egameni lakho kanye nezindlalifa zakho, amafa, ama-ejenti, abameleli, nabanikezeli, khulula ngokuphelele, khipha unomphela, futhi ubambe i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE, Umxhasi Wohlelo lwakho kanye namanxusa akhe kanye nezikhulu zabo, abasebenzi. , abaqondisi nama-ejenti angenabungozi kunoma yikuphi ukulahlekelwa, umonakalo, izindleko, okuhlanganisa izimali ezizwakalayo zabameli, amalungelo, izimangalo, kanye nezenzo zanoma yiluphi uhlobo nokulimala (okuhlanganisa nokufa) okuvela ngenxa noma okuhlobene nokusebenzisa kwakho Isevisi. Uyavuma ukuthi lokhu kukhishwa kuvunyelwe ngokukhululekile nangokuzithandela futhi uyaqinisekisa ukuthi ukuqonda ngokugcwele lokho ovumelana nakho.
Uyavuma ukunxephezela futhi ubambe i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE, Umxhasi Wohlelo lwakho nezinkampani eziphethwe kanye nezikhulu zabo, abasebenzi, abaqondisi kanye ne-ejenti bengenabungozi kunoma yikuphi ukulahlekelwa, umonakalo, izindleko, okuhlanganisa abameli abanengqondo' izimali, amalungelo, izimangalo, izenzo zanoma yiluphi uhlobo nokulimala (okuhlanganisa ukufa) okuvela kunoma yiziphi izimangalo zezinkampani zangaphandle ezihlobene nokusebenzisa kwakho Isevisi, ukwephula kwakho le Migomo noma ukwephula kwakho noma imaphi amalungelo omunye.
Le migomo iyobuswa yimithetho ye-United Arab Emirates.
Le Migomo ihlanganisa sonke isivumelwano phakathi kwakho nama-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE mayelana nesihloko sale Migomo, futhi ithathela indawo futhi imiselele noma yiziphi ezinye izivumelwano zangaphambili noma zesikhathi esifanayo, noma imigomo nemibandela esebenza esihlokweni. udaba lwale Migomo. Le Migomo idala awekho amalungelo ezinkampani zangaphandle ezihlomula.
UKUSEBENZA, UKUFANELELA KANYE NOMSEBENZI
Ukwehluleka kwethu ukuphoqelela ukunikezwa akukona ukuhoxiswa kwelungelo layo lokwenza kanjalo kamuva. Uma ukunikezwa kutholwa kungasebenziseki, ukunikezwa okusele Kwemigomo kuzohlala kusebenza ngokugcwele futhi igama eliphoqelelayo lizothathelwa indawo elibonisa inhloso yethu eduze ngangokunokwenzeka. Akumele unikeze noma yimaphi amalungelo akho ngaphansi kwale Migomo, futhi noma imuphi umzamo onjalo uzoba yize. I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli I-UAE ingase yabele amalungelo ayo kunoma iyiphi inkampani ephethwe noma izinkampani ezingaphansi kwayo, noma kunoma yimuphi ozolandela esikhundleni ngenjongo yanoma yiliphi ibhizinisi elihlobene Namasevisi.
Singahle sibuyekeze le Migomo ngezikhathi ezithile, futhi sizothumela njalo inguqulo yamanje kunawebhusayithi yethu. Uma ukubuyekezwa okunenjongo kunciphisa amalungelo akho, sizokwazisa (ngokwesibonelo, ngokuthumela kubhulogi yethu noma kuleli khasi). Ngokuqhubeka nokusebenzisa noma ukufinyelela kuNsizakalo ngemuva kokuqalisa ukusebenza, uyavuma ukuthi uboshiwe yiMigomo ebuyekeziwe.
Uma unemibuzo noma imibuzo mayelana nokusebenzisa kwakho le nkundla, sicela ukhululeke ukusithinta ku: case@lawyersuae.com Noma shayela + 971 50 6531334.